warkii.com » Wasiirka arrimaha dibadda Algeria oo tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya
Wasiirka arrimaha dibadda Algeria oo tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya
Muqdisho (warkii.com) – Dowladda Algeria ayaa markale Soomaaliya u geftay, iyada oo wasiir ka tirsan xukuumadda dalkaasi uu tusaale xun u soo qaadatay, xilli uu ka hadlayey colaadda ka taagan dalka Liibiya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, Sabri Boukadoum oo la hadlayey wariyeyaasha ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya uga digay in dalkooda uu noqdo sida Soomaaliyada cusub oo kale, sida uu hadalka u dhigay.
Sabri Boukadoum ayaa u muuqdo mid muujinaya in haatan xaaladda Liibiya ay ka wanaagsan tahay tan Soomaaliya.
“Waxaan ka digeynaa in dagaal-wakiileedka uu Libya ka dhigo Soomaaliyada cusub,” ayuu wariyeyaasha u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Algeria.
Algeria oo dhacda waqooyiga Afrika ayaa horey ugu geftay Soomaaliya, waxaana dhowaan madaxweynaha wadankaasi Abdimajid Tebun uu tilmaamay xilli uu ka hadlayey xaaladda Syria in ay noqon doonto mid ka daran Soomaaliya, hadii aan heshiis dhab ah laga gaarin dagaallada muddada dheer ka socda gudaha dalkaasi.
“Xaaladda Libya waxay noqon kartaa mid ka darran sidii dalka Syria, haddii aan la gaarin heshiis nabadeed iyo xabad joojin….waxaan ka baqayaa in qabiil waliba uu is hubeeyo, kadibna ay xaaladdu la mid noqoto sida Soomaaliya oo kale,” ayuu yiri isaga oo warramayeyTV-ga Faransiiska laga leeyahay ee France 24.
Si kastaba ha’ahaatee ma’ahan dalkan oo kaliya wadamada tusaalaha xun u soo qaatay Soomaaliya, waxaana ka mid ah dalalkaas Uganda iyo Mareykanka oo marar badan madaxweynayaashooda ay tusaaalooyin aan wanaagsaneyn u soo qaateen Soomaaliya.